बालकुमारी भन्छिन, ‘श्रीमानले बन्दुकले हानेको होईन, रिसले बन्दुक फाल्दा पड्किएको हो !’ – ebaglung.com
२०७५ फाल्गुन १८, शनिबार १२:४२	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
दिनेश शर्मा, बुर्तिवाङ २०७५ फागुन १८ । बडीगाड गाउपालिका-१० दर्लिङ पात्लेकटेरीमा श्रीमान चन्द्रबहादुर घर्तीले भरुवा बन्दुकले साँप्रामा गोली हानेर घाईते भएकी भनिएकी श्रीमती बालकुमारी घर्ती अहिले बुर्तिवाङमा छिन् ।
उनले प्रहरी समक्ष घटनाको दिन विहान हिउँ परेकोले खाना पकाउन ढीला भएको थियो, श्रीमान बाहिरबाट आएर किन खाना नपाएको भन्दै बन्दुक फाल्दा मेरो खुट्टामा ठोकिएर पड्किएको बताएकी छन् । उनले हामीबीच कुनै रिसिबी छैन, रिसिबीले हानेको होईन पनि भनेकी छन् ।
ईलाका प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक राजु लामाका अनुसार महिलाको साँप्राका खासै ठुलो चोट नलागेको सामान्य रहेको जानकारी दिए । बन्दुक भने आफु बिबाह गरेर आउदा देखी नै घरमा रहेको प्रहरीलाई बताएकी छन् ।
भिङगिठे ईलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रनानि भोजबहादुर बानियाँले हिजो अबेर राति ११ बजेमात्र महिलालाई बुर्तिवाङ ईप्रकामा ल्याईएको बताए ।
बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा. कृष्णहरि श्रेष्ठले पनि महिला सामान्य अवस्थामा रहेका ईबागलुङलाई बताए । बिहान १० बजे सम्पर्क गर्दा एक्सरे गर्न अहिले बिजुली नभएकोले ११ बजे पछीमात्र बिजुली आएपछी एक्सरे गर्ने डा श्रेष्ठको भनाई थियो ।
भरखरमात्र स्वास्थ्य केन्द्रमा फोनसम्पर्क गर्दा महिला ८ महिनाको गर्भ (गर्भाष्ठे) भएकोले एक्सरे गर्न नमिल्ने डा. श्रेष्ठको भनाई उधृत गर्दै सिनियर अहेब (अधिकृत) ऋतुवण पौडलले ईबागलुङलाई बताए ।